हाइड्रोपावरको सेयरमा किन ओइरिए लगानीकर्ता ? यस्तो छ बिश्लेषण - Arthasansar
बुधबार, २२ बैशाख २०७८, १६ : ५० मा प्रकाशित
आज बुधबारको सेयर कारोबारमा हाइड्रोपावर उपसमूहमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण देखिएको छ । आज नेप्से परिसुचक ५.०९ अंकले घट्दापनि हाइड्रोपावर उपसमूहको परिसुचक भने ४५.२७ अंकले बढेको छ ।
आजको कारोबारमा हाइड्रोपावर उपसमूहका कम्पनीको सेयरको माग पनि उच्च देखिन्थ्यो । आज सर्वाधिक सेयर मूल्य बढ्ने शिर्ष १० कम्पनीहरु मध्यमा महिला लघुबित्त वित्तिय संस्था, बिशाल बजार कम्पनी र समता लघुबित्त बाहेकका ७ वटा कम्पनी हाइड्रोपावर उपसमूहका रहेकाछन् ।
त्यस्तै आज सर्वाधिक सेयर मूल्य घट्ने १० कम्पनीहरुको सुचिमा हाइड्रोपावर उपसमूहको एक मात्र कम्पनी परेको छ । आज यो उपसमूहको युनाईटेड मोदि हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरमूल्य २.८२ प्रतिशतले घटेको छ ।
सेयर बिश्लेषक डा. केशब श्रेष्ठका अनुसार अहिले हाइड्रोपावर उपसमूह यसरी उचालिनुपर्ने कुनै आधार र कारण देखिदैनन् । यो नितान्त सेयरमा चलखेल गर्ने समूहको खेलमात्र हो । अहिले कतिपय हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले कम्पनीको वित्तिय विवरणहरुमा समेत हेरफेर गरिरहेको भन्दै उनले यसबाट नयाँ लगानीकर्ताहरु सजग हुनुपर्ने बताए ।